युरोपका विशाल भूमिहरू थुप्रै दन्त्यकथा र परीकथाहरूका उत्पत्ति हुन्, आश्चर्यजनक परिदृश्य, र पुरानो रहस्यहरू राख्ने गाउँहरू. केन्द्रीय विश्वव्यापी शहरहरू नजिक वा चुनढुंगा पहाडहरू पछाडि tucked, युरोपमा सुरम्य र मनमोहक गाउँहरूको संख्या अनन्त छ. अझै, छन् 10 युरोपमा रमणीय गाउँहरू जसको सौन्दर्य र जादुई सबैले ओगटेको छ.
सेता घरहरु परम्परागत चित्रहरु संग सजिलो र पुरातन शिलालेखहरूलाई स्ग्राफिटी भनिन्छ. रोमान्स, स्थानीय भाषा, बचाइएको छ र आज पनि बोल्दछ.
मोसेल नदीको किनारमा सुत्ने गाउँ. आधा-लक घरहरू र साँघुरो लेनहरूको साथ चित्रमय कॉटेजहरू. गिरावट मा सुन्दर, जब हरियो घासका मैदान र रूखहरू तिनीहरूको सुनहरा पोशाक लगाउँछन्, आकर्षण र सुन्दर कोचेम को दर्शनीय सेटिंग जोड्दै.
दाखबारी र चारै तिर घेरा पहाडहरू, कोचेम गाउँ पोष्टकार्ड उत्तम छ. गाउँको अनुभव र सबै रमणीय गाउँ दृश्यहरू स्नान गर्ने उत्तम तरिका साइकल हो.
कालेजैले नोट्रे-डेम डे डाइनन्टको गुम्बज कालो चूना पत्थर पहाडहरूको पृष्ठभूमिमा प्रमुख विशेषता हो।. रंगीन घरहरू र अगाडि डुङ्गाहरू, शानदार दृश्यहरू पूरा गर्नुहोस्.
तपाईं पैदल वा द्वारा गाउँ अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ साइकल, वा केबल कार द्वारा. यदि तपाईं उचाइ को डर छैन, त्यसोभए केबल कारबाट बाहिर आउने दृश्यहरूले तपाईंको सास लिनेछ. गाउँका दृश्यहरु अवश्य पनि भियनेस कलाकारहरु बाट एक प्रेरणा भएको छ.
सेन्ट. जिन्नस गाउँले हाम्रो सुविधा दिन्छ 10 यूरोपमा प्राकृतिक गाउँहरू खडा छत ढु stone्गा घरहरूको लागि धन्यवाद. साथै, १२ औं शताब्दीको चर्च र १th औं शताब्दीको महल गाउँको बिचमा ठीक छ. घुमाउने सडकले गाउँ र यसको कालो रंगको ढु stone्गाको घरहरू मार्फत सबैभन्दा प्रभावशाली दृश्यहरू र साइटहरूमा लैजान्छ.
पैदल यात्राले तपाईंलाई १ back औं शताब्दीको जीवनमा सिधा फिर्ता लिनेछ. इ England्ल्यान्डको सब भन्दा सुन्दर गाउँ कोलन नदीको किनारमा बसिरहेको छ. यो एक पटक वीभरको कुटीरबाट ऊन लँगाउनको लागि उत्तम स्थान हो. बाइब्री जग्गा एक को लागी उपयुक्त छ दिउँसो पिकनिक वा पर्यटकहरूको भीडले उनीहरूको शान्त र निद्रामा बाधा पुर्‍याउनु अघि बिहान सबेरै टहल्नुहोस्.
सेस्की क्रुमलोभको अविस्मरणीय दृश्यको लागि सेस्की क्रुमलोभ किल्लामा चढ्न अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ।, भ्लाताभा नदी, र बोहेमिया क्षेत्र वरिपरिको प्रकृति.
के तिमी हाम्रो ब्लग पोष्ट इम्बेड गर्न चाहन्छ "१० युरोपमा दर्शनीय गाउँहरू"तपाइँको साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/e એમ્બેડ/https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/?lang=ne اور– (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
beautifuldestinations beautyvillageseaurope फेरीटाईलटाउन scenicvillageseurope गाउँमा